Liverpool oo hoggaanka u qabatay horyaalka Ingiriiska
Kooxda Liverpool ayaa meel adag kala soo baxday guul ay xalay ka gaadhay Westham
kaddib markii gool lagaga horreeyay kaddibna ay laba gool oo darandoorri ah ka daba keeneen. Kooxda Westham ayaa ku horraysay goolka kaddib markii Fornales uu daqiiqaddii 10aad soo taabtay shabaqa kooxda Liverpool. Muddo kaddib ayaa xiddigga reer Masar ee Maxamed Salah uu u dhaliyay kooxda Liverpool goolkii barbarraha kaddib markii loo dhigay rikoodhe isaga lagu galay, goolkaas waxa uu yimi daqiiqado uun ka hor intii aaanu dhammaan haafkii hore ee ciyaartu. Kooxda Liverpool ayaa sii wadatay dedaalkii ay ku doonaysay guusha, waxana xiddigga cusub ee kooxda Diago Jota uu u saxeexay goolka guusha daqiiqaddii 85aad kaddib markii uu kubad qurux badan ka helay Shakiri.
Liverpool ayaa guushaas kaddib waxa ay hoggaaminaysaa horyaalka Ingiriiska iyada oo 16 dhibcood leh, halka kooxda Westham ay ku istaagtay 8 dhibcood. Maxamed Saalax ayaa xalay dhaliyay goolkiisii 7aad, waxana uu ku jiraa kaalinta 2aad ee gooldhalinta horyaalka Ingiriiska iyada oo uu ka horreeyo wiilka reer Kuuriya ee kooxda Tottenham. Maxamed Salah ayaa 22 gool dhaliyay 25kii ciyaarood ee ugu danbeeyey ee uu u saftay kooxda Liverpool.